Ukuzimisela kukaTemba Bavuma kufaka enkingeni abaqoki beqembu lakuleli - Bayede News
Angase amangaze abaningi umdlali wekhilikithi obhekwe ngabovu ukuthi abe seqenjini leProteas emidlalweni yeNdebe YoMhlaba yeT20 ezobanjelwa e-Australia ngonyaka ozayo. Uzobashiya bekhexe imilomo uTemba Bavuma.
UBavuma wazakhela igama emidlalweni yobungqungqulu ngesikhathi etakula iProteas ingaphansi kwengcindezi ngokubambisana nabadlali abafana noFaf Du Plessis noQuinton De Kock. Lokhu kufakazelwa imigijimo abayenza eli-156 bebambisene noDu Plesses eyasiza iProteas inqobe umdlalo ibhekene nePakistan nyakenye. Ngokubambisana noDe Kock sebenze imigijimo engama-790 emidlalweni eli-18 kubalwa imigijimo eli-144 abayenza elakuleli libhekene ne-Australia neli-166 iProteas itholene phezulu neNew Zealand. Lokhu kwatakula iProteas eyayithwele kanzima kule midlalo.
Lokhu kwenza kahle emidlalweni yoqungqungqulu kushiye abanye bethi ngeke akwazi ukudlala imidlalo yosuku olulodwa kodwa emidlalweni emibili asayidlalile yosuku olulodwa (ODI) usekhombisile ukuthi uyilungele le midlalo. Lokhu kufakazelwa izibalo zakhe, emidlalweni emibili asayidlalile usenze imigijimo eli-170. Lokhu kwashiya lo mdlali ekhala ngokuthi akawatholanga amathuba okuzibonakalisa ngaphambi kokuqokwa kweqembu lakuleli eladlala imidlalo yeNdebe YoMhlaba e-England ngoNhlaba.
Muva nje uBavuma uyakukhombisa ubunkunzi bakhe emidlalweni yosuku olulodwa esigabeni seT20. Emidlalweni emibili elakuleli eliyidlale e-India ngoMfumfu uBavuma wenze imigijimo engama-49 emabholeni angama-43 kwathi emdlalweni wesibili wenza imigijimo engama-27 engakhishwanga.
UBavuma ongukaputeni weJozi Stars edlala kuMzansi Super League (MSL) eqhubekayo uyaqhubeka nokwenza kahle yize iqembu lidonsa kanzima. Iqembu lizothembela efomini yakhe njengoba kudingeka liqoqe amaphuzu agcwele ukuze likwazi ukudlulela esigabeni esilandelayo.
UBavuma usedlale imidlalo emine kuMSL usenze imigijimo eli-160. Ngesikhathi iStars sidlala neNelson Mandela Bay Giants wenza imigijimo engama-27, sitholene phezulu neCape Town Blitz wenze engama-38, sibhekene neBlitz emdlalweni wesibili wenza engama-62 kwathi kowogcina sidlala neGiants kowesibili wenza engama-27. Izibalo zakhe zemidlalo yosuku olulodwa yasekhaya zikhombisa ukuthi ungumdlali okwaziyo ukudlala imidlalo yeT20. Usedlale imidlalo engama-67 wenza imigijimo eyi-1515. Uwuqede ngegiya eliphezulu unyaka odlule esigabeni seT20 ngesikhathi esiza i-Imperial Lions inqobe iCricket South Afrika T20 Challenge.
Emdlalweni owandulela owamanqamu bedlala neHollywoodbet Dolphins wenza imigijimo engama-52 engaphumanga kanti kowamanqamu wenza ezibukwayo betholene phezulu neWarriors enza imigijimo eli-104 bakwazi ukugcina bedle umhlanganiso.
Ukwenza kahle kwakhe kuzokwenza kube nzima ukuba abaqoki beqembu leProteas elizoya e-Australia bamushalazele. Okuyikho okuzoshiya abaningi bekhexe imilomo ngoba lo mdlali bekade bengamboni njengomdlali wemidlalo yosuku olulodwa ikakhulu yeT20.
UBavuma uthe uyakuqonda yingani abantu bekade bengamuboni njengomdlali wemidlalo yeT20 athi ingoba amathuba asawatholile esigabeni esiphezulu awemidlalo yobungqungqulu.
Omunye umdlali abaqoki okuzoba nzima ukumshiya ngaphandle nguReeza Hendricks owasala ngaphandle eqenjini lakuleli eladlala imidlalo yeNdebe YoMhlaba maphakathi nonyaka. UHendricks odlalela iJozi Stars uyaqhubeka nokukhombisa amava akhe kwimidlalo ye-T20.
Nyakenye wayengomunye wabadlali abahambi phambili ngemigijimo kuMSL njengoba aqeda enze imigijimo engama-412 emidlalweni eli-12. Nakulo nyaka ungumunye wabadlali abahamba phambili ngemigijimo njengoba esenze eli-161 emidlalweni emine.
Okumbeka eqhulwini usedlalele elakuleli imidlalo engama-22 yeT20 wenza imigijimo engama-593.
nguQhelani Msweli Nov 21, 2019